BUDDHIST TERMS' Dictionary: NON-RETURNER - အနာဂါမိ
NON-RETURNER - အနာဂါမိ
အနာဂါမိ - အနာဂါမ်၊ ကာမဘုံ၌ ပဋိသန္ဓေမနေသော ပုဂ္ဂိုလ်။
သမထ၀ိပဿနာ ရှုပွားရာတွင် အနာဂါမိမဂ်သို့ ဆိုက်ရောက်ဆဲပုဂ္ဂိုလ်ကို အနာဂါမိမဂ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်သည်။ ထိုမဂ်စိတ် ချုပ်ငြိမ်းသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် အနာဂါမိဖိုလ်ဖြစ်၏။ ထိုအနာဂါမိဖိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဤလူ့ဘုံသို့ ပြန်မလာတော့သောကြောင့် အနာဂါမ်ဟုခေါ်သည်။
အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒေါသနှင့် ကာမတဏှာကို အကြွင်းမဲ့ပယ်သည်။ ဗျာပါဒ၊ ပိသုဏ၀ါစာ၊ ဖရုသ၀ါစာ ကမ္မပထသုံးပါးကိုလည်း ပယ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကာမဂုဏ်တရားတို့ကို ခံစားခြင်း၊ ပျော်မွေ့ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးငိုကြွေးခြင်း မရှိတော့ချေ။
ထို့ကြောင့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖြင့်သေလျှင် ကာမသုဂတိ ၇-ဘုံ၌ မဖြစ်ရတော့ဘဲ အထက်ရူပ, အရူပ ဗြဟ္မာဘုံတို့၌သာ ဖြစ်ရသည်။
One who is not subject to rebirth in the realm of sensual pleasures
He who is on the verge of reaching the third state of the Path while engaged in the Tranquility and Insight meditation is called one of Anᾱgᾱmimagga. As soon as the Path-consciousness (magga-citta) ceases the Fruition of Anᾱgᾱmi (Anᾱgᾱmi phala) arises in him. He as one of Anᾱgᾱmi phala is then called Anᾱgᾱmi, for he no longer comes back to the world of human beings.
The Non-Returner eliminates hatred (dosa) and craving for sensual pleasures (kᾱmataṇhᾱ). He also eradicates the three actions of ill-will (byᾱpᾱda), back-biting (pisuṇa-vᾱcᾱ) and harsh words (pharusa-vᾱcᾱ). He therefore does not enjoy sensual pleasure any more nor does he suffer sorrow and lamentation. Asaresult he is reborn only in the upper world of Brahmas and as fine material sphere (Rupavᾱcᾱra) and non-material sphere (Arupavᾱcᾱra) but not in the seven planes of the sensuous sphere.